ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ - ဆေးပညာ. ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ သည် ဆေး
ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ - ဆေးပညာ. ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ သည် ဆေးပညာဘွဲ့ရရှိပြီးသူများ အထူးကု အထူးပြုဘာသာရပ်များကို လေ့လာဆည်းပူးပြီးနောက် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သည့်အခါ ..
၁၉၇၄ - ဆေးဝါးဗေဒ.
၂၀၀၀ - ဥပဒေရေးရာဆေးပညာ.
၁၉၉၉ - ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆေးပညာ၊ စိတ်ကျန်းမာပညာ.
၂၀၀၁ - အရေပြားရောဂါပညာ၊ ကင်ဆာရောဂါဆေးပညာ၊ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှုပညာ.
၁၉၈၀ - မျက်စိရောဂါပညာ.
၁၉၈၇ - နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းရောဂါပညာ.
၁၉၉၂ - မေ့ဆေးပညာ၊ အဏုဇီဝဗေဒ၊ ဓာတ်မှန်ပညာ.
၁၉၉၁ - ရောဂါဗေဒ.
၁၉၉၃ - ဇီဝဓာတုဗေဒ.
၁၉၇၁ - ခန္ဓာဗေဒ၊​ ဆေးပညာ၊ ခွဲစိတ်ကုပညာ၊ သားဖွား မီးယပ်ပညာ.
၁၉၇၇ - ကလေးကျန်းမာပညာ.
၁၉၈၂ - ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး.
၁၉၇၂ - ဇီဝကမ္မဗေဒ၊ အရိုးရောဂါပညာ.
၂၀၀၆ - ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆေးပညာ.
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုပညာ.